DHAGEYSO: Guddoomiye Baadiyow oo madaxda DF Somaliya dusha u saariyay tabashooyin ka yimid Beelaha Galmudug | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Guddoomiye Baadiyow oo madaxda DF Somaliya dusha u saariyay tabashooyin ka...
DHAGEYSO: Guddoomiye Baadiyow oo madaxda DF Somaliya dusha u saariyay tabashooyin ka yimid Beelaha Galmudug
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta Galmudug, Cabdiraxmaan Baadiyow, ayaa madaxda dowladda federaalka ku eedeeyay tabashooyin ka yimid qaar kamid ah beelaha ku midoobay dhismaha maamulkaasi.
Cabashadda oo uu raali gelin ka bixiyey kana fogeeyay in guddigiisa uu mas’uul ka yahay ayaa waxa uu ku sheegay in qaabka loo qeybiyey hadal-jeedinta munaasabadii furitaanka shirkaasi xasaasiga ah.
Shirkaasi ayaa habeenimadii Khamiista waxa uu ka furmay magaaladda Dhuusamareeb, xarunta dowlad goboleedkaasi, waxaana ka qeybgalay mas’uuliyiin uu ra’iisul wasaare Khayre uu kamid yahay.
Shirkan oo maalmaha soo aadan sii socon doona ayaa waxaa la filayaa in gabagabadda laga soo saaro war-murtiyeed ay ku cad yihiin dhamaan qodobadii ay isla meel-dhigeen dhinacyadda mudadii ay kulan-sanaayeen.
madaxda dowladda Soomaaliya
tabashooyinka ka yimid